ကျွန်တော်လုပ်တာပါ! ရက် ၉၀ ။ ဒီမှာငါသင်ယူခဲ့တာတွေ။ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကျွန်တော်လုပ်တာပါ! ရက်ပေါင်း 90 ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူခဲ့တာတွေပါပဲ
ငါလုပ်လိုက်တာမယုံနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တယ် ဆယ်နှစ်စွဲ - ပြီးပြီ! ငါကအခြားလူတစ်ယောက်ပါ၊ ငါဒီမှာတွေ့ခဲ့တာ။
1 ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေယခုအခါငါ့ထံသို့သနားစရာနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာပုံရသည်။ ထိုင်ခုံမှာထိုင်ရတာငါဘယ်တော့မှမတွေ့ကြုံရမယ့်လူတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိအောင်ဘယ်လိုဖြုန်းတလဲလဲကြည့်ရတာအရမ်းခက်ခဲပါတယ်။
2 ။ ဒါဟာအစဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယ-rate ကိုပုံရသည်။ တစ်ခုခုကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ညစာတစ်ခုရဲ့ပုံကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုကြိုးစားရှာဖွေခြင်းနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်တကယ့်အရာအတွက်မကောင်းသောအစားထိုးဖြစ်သည်။
3 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒစွမ်းအင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ faucet ကိုပိတ်ထားသည့်အခါ, ရေအခြားတစ်နေရာရာကိုသွားရန်ရှိသည်။ သင်၏ PMO စွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်သင်၏ဘဝ၏အခြားဒေသများသို့ချေးငှားရန်စိတ်ကူးကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်စွမ်းအင်ဖြင့်အခြားအရာများကိုလုပ်ချင်သည် - ကွဲပြားသောအလုပ်တစ်ခု၊ ကျောင်းတက်ရန်၊ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊
4 ။ ဒါဟာ objectification ဘယ်လောက်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေသင်ပြသထားတယ်။ သငျသညျအခညျြးနှီးသောဤလူများထဲကတစ်ခုချင်းစီကိုတ ဦး တည်းတကယ့်ဘဝ, ဒါမှမဟုတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အိပ်မက်များ မျှော်လင့်ချက်။ အလိုဆန္ဒများ။ သူတို့ကတစ်စုံတစ်ယောက်ကို“ ဖေဖေ” သို့မဟုတ်“ မေမေ” ဟုခေါ်ကြသည်။ ကာတွန်းတွေကိုကြည့်ပြီးအတန်းတက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါတစ်ခုခုဖြစ်ချင်ကြတယ်။ ၎င်းကိုသင်သိရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုလိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုအဖြစ်ပြန်လည်မြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
5 ။ ငါ၏အ PMO စွဲရပ်တန့်ငါ့ကိုစစ်မှန်သောအချစ်အလိုရှိကြသည်တွင်စေတော်မူပြီ။ ငါလိင်စွဲလမ်းခဲ့သည် များသောအားဖြင့်ငါတောင်မှမလိုချင်ဘူး။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်စစ်မှန်တဲ့ရင်းနှီးမှုရချင်တယ် ကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်များကိုသူတို့ထဲသို့သွတ်သွင်းပြီးသူတို့နှင့်အတူလူတစ် ဦး ဖြစ်လာစေရန်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားအစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ဖြစ်တည်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုယုံကြည်ပါ။ ယခုတွင်လိင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်သေးငယ်သော၊
6 ။ seductive နှင့် / seddit လူတွေကငါ့ကိုထွက်တွား။ သူစိမ်းတွေကိုအဆက်မပြတ်ကောက်ခံနိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အထင်ကြီးလေးစားမိတယ်။ ၎င်းသည်အချို့သောလူများအတွက်ကောင်းမွန်သောဘဝပုံစံဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ငါဟာလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ဘောင်းဘီထဲကို ၀ င်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာ၊ ဟန်ဆောင်ရတာနာကျင်စေတယ်။ ငါနောက်တဖန်ထိုသို့ပြုဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်
7 ။ သင်အချိန်တန်ရှိသည်! ရုတ်တရက်သင်၏အသက်တာ၏နာရီများသည်နောက်တစ်ဖန်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသိမ်းယူ! မင်းအတွက်အချိန်ပိုလုပ်ပေးပါ ငွေရှာပါ။ ဝါသနာရှာပါ။ အလားတူအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူအုပ်စုတစ်စု join ။ PMO သည်သင်၏အားလပ်ချိန်ကိုမနှောင့်ယှက်သောနေ့များသည်ပိုကြာသည်။
ငါ PMO စွဲဘူးသောနောက်ဆုံးသောကာလ, ငါအလယ်တန်းကျောင်း၌ရှိ၏။ နောက်ပိုင်းနှစ်များသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဟုထင်ရသည်။ ငါဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး ဒီ letch ကလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါ။ သင့်ကိုယ်သင်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်ဖြစ်ပါသည် - သင်ကြာကြာ fap- အခမဲ့နေဖို့ ... သင်ပြန်သွားရန်ဆန္ဒရှိလျော့နည်းသည်။ နောက်ဆုံးတော့သင်ဘယ်တော့မှဂရုမစိုက်တော့ဘူး။
တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကဲ့သို့ရှိဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏လူအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါအားနည်းခဲ့ပါတယ်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါရန်, လာရန်ဤအရပ်ဌာနကိုခံခဲ့ရသည်ထားရှိခြင်း တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော။ ရှက်စရာအမှုအရာကိုဆွေးနွေးစုစုပေါင်းသူစိမ်းကူညီမှုအတွက်သင်တို့ရှိသမျှသည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ ဟားဟား။
သွားကြဖို့လမ်း, / nofap။ သင်သည်လူများအားစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်ကူညီပေးနေသည် - တစ်ချိန်တည်းတွင်အသွင်တစ်မျိုးတည်း။ ငါဒုတိယတန်း၌ရှိစဉ်ကတည်းကငါရွှေကြယ်ပွင့်၏ဤမျှဂုဏ်ယူသည်မဟုတ်။ 🙂
ကျွန်တော်လုပ်တာပါ! ရက်ပေါင်း 90 ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူခဲ့တာတွေပါပဲ မှ NoFap